SEMA EAU VIVE ANDRANOVELONA: Nandray ny ekipan’ny JIRAMA tamin’ny herinandro lasa teo – Madatopinfo
Niara-nitsidika ny SEMA Eau Vive Andranovelona ny Tale Jeneralin’ny orinasa Star Marc Ponzmetier, sy ny delegasiona eo anivon’ny JIRAMA (Jiro sy Rano Malagasy) izay notrarihin’ny Tale Jeneraliny Vonjy Andriamanga ny herinandro lasa teo. Tamin-kafaliana tokoa no nandraisan’ny ekipan’ny Star azy ireo teny an-toerana. Niompana tamin’ny fifampizarana traikefa ny vontoatin’ny fitsidihana notanterahan’ny roa tonta tamin’izany. Ny ozinina ao Andranovelona io mantsy no mitantana manontolo ny rano ao aminy, ny loharano voajanahary mankao amin’ny ozinina avy eo mankany amin’ny fanatanterahana ny fambolen-kazo. Fotoana noararaotin’ny JIRAMA ihany koa moa io fidinana ifotony io, nahitana ny pitsopitsony sy ny mety ho fahasarotana eo anivon’io ozinina io indrindra eo amin’ny lafiny elektronika.